Equity and Equality | ALARM Myanmar
သာတူညီမျှမှုရှိခြင်း (Equity) နှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း(Equality) က သီးခြား အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်စီရှိကြပေမဲ့ ရောထွေးတတ်ကြပါတယ်။ ပုံမှာပြထားသလို ခုံတယောက်တလုံး ပေးခြင်းက အရပ်အနိမ့်အမြင့် ကိုမစဉ်းစားပဲ Equality တန်းတူညီမျှမှုကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ အရပ်ပုသူက ဘောလုံးပွဲကြည့်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ အလယ်က ပုံမှာတော့ တဦးချင်းစီရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက် လိုအပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အားလုံးဘောလုံးပွဲကြည့်နိုင်အောင် စီမံပေးခြင်းက သာတဲ့သူနဲ့ တူသွားအောင် အရပ်အနိမ့်အမြင့်အလိုက် ခုံဝေမျှမှု လိုအပ်သလို ခွဲဝေစီမံခြင်းက Equity ပါပဲ။
ခု ကိုဗစ်ကာလမှာ အစိုးရက ကျေးရွာတွေကို တစ်အိမ်ထောင် လေးသောင်းကျပ် နှုန်းနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့တဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကို ပံ့ပိုးဖို့ စီစဉ်တယ်။ ကျေးရွာတွေမှာက အစိုးရ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ စီစစ်ချက် အတိုင်း အကူအညီပိုလိုမဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပြုစုရမှာ မလွယ်ကူတာရယ်၊ အငြင်းပွားပြီး ကျေးရွာညီညွတ်မှုပျက်ပြားကာ ငြိုငြင်စရာတွေဖြစ်မှာကို စိုးကြောက်ပြီး၊ ကျေးရွာက တာဝန်ရှိသူတွေက ရွာအတွက်ရသမျှထောက်ပံငွေကို ရှိသမျှအိမ်ထောင်စုနဲ့စားပြီး အပုံတိုက်ညီတူညီမျှ ရွာထဲရှိသမျှ အိမ်ထောင်စုအားလုံးကို ဆင်းရဲချမ်းသာ မခွဲခြားတော့ပဲ ဝေလိုက်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကတော့ အားလုံးကိုလုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်လောက်အောင် ဘတ်ဂျက်ငွေအင်အား မရှိတာမို့ လိုတဲ့သူတွေ ပိုလို့ရပါစေ ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ equity ကို ရှေ့ရှုပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျေးရွာတွေက အလွယ်နည်း equality မူကို အခြေခံကာ ရတဲ့ငွေ ဝေလိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ရွာပေါင်းထောင်ချီပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီပံ့ပိုးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ တာဝန်ရှိသူတဦးအနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာလောက် အလုပ်လုပ်ဘူးပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ရွာတွေ ရာနဲ့ချီပြီးရောက်ဘူး နေဘူး ထိတွေ့ လိုက်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဘူးပါတယ်။ ရွာတွေရဲ့ သဘောကတော့ equality ကို အခြေခံတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုပဲ ဆောင်ရွက်ဖို့အားသန်တာကို တွေ့ရတော့ အားနည်းတဲ့သူကို ပိုဖေးမကူညီပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်မမြောက်ဘူးဆိုတာ တွေ့လာရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး ဘာများမှားသွားသလဲ ဘာတွေများ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ အားနည်းသွားလည်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါဒီလိုတွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့စည်းမှာလည်း မည်သည့်ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ အားနည်းသူကိုဖေးမ ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့ အခံစိတ်ကတော့ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လက်တွေ့မှာ လူတဦးချင်းနေမရတော့ စုဖွဲ့ပြီး community အနေနဲ့နေကြရပြီး ကြုံတွေရတဲ့ပြဿနာကို စုပေါင်းတာဝန်ယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နည်း collective management နဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလို တစ်ဦးချင်းရဲ့ အခွင့်အရေးကိုဦးစားပေးတာထက် လူအများရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပို အလေးထားတဲ့ စိတ်က ပို အကဲသာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ညီညွတ်မှုမပျက်ပြားလိုမှု ဟာ ပိုအရေးပါလာပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း ပုံရဲ့ ညာဘက်စွန်းအကွက်ထဲမှာ ပြထားသလိုပဲ လူတိုင်းဟာ အရပ်အနိမ့်အမြင့်ကွဲပြားပေမဲ့ စနစ်ဆိုးအောက်မှာ လူမှုဒုက္ခတွေခံစားနေရတာမို့ ဘယ်လိုကူညီ ကူညီ၊ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေမဲ့ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကျေးရွာတွေမှာ ကိုဗစ်ကာလမှာ လူတိုင်းဟာအသီးသီးဒုက္ခရောက်နေကြာတာမို့ တောင်သူကြီးလဲကြပ်တည်း၊ တောင်သူငယ်လဲ ဒုက္ခရောက် မြေယာမဲ့လည်း မလူးသာမလွန့်သာဖြစ်နေတာမို့ မစို့မပို့ရတဲ့ အကူညီနဲ့တော့ ရွာညီညွတ်ရေး အပျက်မခံတော့ဘူး၊ equality မူကို အခြေခံပြီး လက်တွေကျကျ စီမံခန့်ခွဲ ဝေငှလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ သူ့ရှုဒေါင့် သူ့အမြင်က အစိုးရအုပ်ချုပ်သူ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အမြင်ရှုဒေါင့်နဲ့တော့ကွဲပြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်က မမှန်ပေမဲ့ မမှားဘူးလို့ပဲပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကူညီပေးရေး အားနည်းသူကို ပိုမိုဖေးမကူညီကာတန်းတူညီမျှဖြစ်စေရေး လုပ်ဆောင်လိုတဲ့အခါမှာ package သဘောမျိုးသဖွယ် တောင်သူကို ကူညီတဲ့အစီအစဉ် မြေမဲ့ယာမဲ့ကို ကူညီမဲ့အစီအစဉ် သက်ကြီးရွယ်အို ကလေးသူငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ကူညီမဲ့ အစီအစဉ်တွေဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အချိတ်အဆက်ရှိရှိနှင့် ရှေ့နောက်ချိန်ကိုက်ညီစွာ sequencing လုပ်နိုင်ကာမှ အစိုးရရဲ့ development resources တွေဟာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ထိထိရောက်ရောက် efficient and impactful ဖြစ်စွာ အားလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု inclusive growth and development ကိုရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Equity အပေါ်အခြေခံစဉ်းစားပြီး ကူညီပံပိုးကာ တဖြေးဖြေး Equality ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နည်းကတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာ အားလုံးတဖြေးဖြေးနဲ့တန်းတူညီမျှရှိရေး တိုးတက်ရရှိတဲ့ အသီးအပွင့် တွေ ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ ခံစားရရှိနိုင်ရေးလုပ်နည်းကိုင်နည်း ချည်း ကပ််မှုတခုပါပဲ။ (ကွန်မြူနစ်စနစ်က တော့ အားလုံးတပြေးညီဝေမျှမှုကို အလေးပေးပါတယ်၊ ခေါင်းတလုံးသာတဲ့သူကို အရင်ရှင်းထုတ် လူတန်းစားညှိုလေ့ရှိပါတယ်)
မြင်သာအောင်ဥပမာ ထပ်ပေးရရင် ကျားမ တန်းတူညီမျှရေး Gender Equality ဆိုပြီး မီတာ၁၀၀ ပြေးပွဲမှာ ယောကျာ်းလေးနဲ့ မိန်းခလေး တာအတူထွက်ပြီး မပြေးခိုင်းသင့်ပါဘူး၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ သဘာဝအရ ဇီဝကမ္မ ကွဲပြားမှုကြောင့် အမျိုးသားတွေထက် ခွန်အားအရာမှာ အားနည်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြေးပွဲတခုတည်း ပြေးခိုင်းမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ ကို မီတာ ၂၀/၃၀ အကျောပေးပြီး တာထွက် ခိုင်းမှ သာတူညီမျှမှုကို ယောကျာ်းတွေနဲ့တန်းတူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ equity နဲ့ equality မတူပုံကို ကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးကျင့်သုံးနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ က တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း သာတူညီမျှမှု ဘက်ကစဉ်းစားပြီး ဦးစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ တရားမျှတမှု ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မို့ဆို equality ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ် လူလည်ကျမှုတွေ နဲ့ပဲ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။
Copyright © 2020 ALARM Myanmar. All rights reserved. Powered by MISL.